Musikana ane makore 19 okukura akarohwa negumi nemashanu nababa vake wekurera - teles achidemba
Musikana ane makore 19 okukura akarohwa negumi neshanu naatezvara
Chokwadi chakaitika Chipiri manheru kuVaires-sur-Marne (77). Around 21 p.m., mapurisa akaenda kuimba yekugara paRue des Pêcheurs kunetsana kwemhuri.
Mune imwe yekamuri yekurara, mukadzi wechidiki wemakore 19 aive akarara mudziva reropa. Ainge achangobayiwa nemaronda gumi nemashanu ekurohwa, akatakurwa kumashure uye kudivi. Akaratidza lacerations asiwo akadzika maronda.
Mutambi weSouth Africa asingapfeke zvipfeko zvemukati akadzingwa ...
Akakuvadzwa akaburitswa helikoputa ari muchipatara cheLa Pitié-Salpêtrière muParis. Mazuva ake aisazova munjodzi.
Mumwe murume waamai vake, ane makore makumi matatu nemanomwe, achimanikidzwa nedoro, akasungwa akaendeswa mumaoko emapurisa. Iye ndiye akabaya munhu akabaya banga nekieni yekukicheni, iro banga raro rinosvika 32 cm.
Amai vemurume weyemurwadzi nemunun'una vacho vaive varimo mufurati asi havana kuenda pachiitiko ichi.
Zvinokonzera kurwiswa izvi hazvisati zvazivikanwa. Ivo baba vekurera vanofanirwa kuunzwa nemusi weChina vachiponda.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://onvoitout.com/une-jeune-fille-de-19-ans-poignardee-a-15-reprises-par-son-beau-pere/
Mutumbi wemurume akafa makore matanhatu apfuura wakawanikwa mumba make
Mutyairi wemarori akapfurwa akafa negeji panguva yekutarisa
Mutambi weSouth Africa asingapfeke bhurugwa remukati akadzingwa mudunhu ... heinoi ...